Fitsarana raharaham-pifidianana :: Ben'ny tanàna dimy naongan'ny Filankevi-panjakana • AoRaha
Fitsarana raharaham-pifidianana Ben’ny tanàna dimy naongan’ny Filankevi-panjakana
Manomboka mamoaka tsikelikely ny didim-pitsarana tamin’ireo fitoriana an-jatony momba ny fifidianana ben’ny tanàna, tamin’ny 27 novambra 2019, ny Filankevi-panjakana. Ben’ny tanàna efa lany tamin’ny fomba ofisialy no niongana tamin’ny toerany tamin’ireo raharaha iraika ambin’ny folo sy telonjato voatsaran’ny Filankevitra, hatramin’ny zoma lasa teo. « Izany hoe, ben’ny tanàna dimy vaovao indray izany no lany handray ny toeran’ireo teo aloha, taorian’ny fivoahan’ny didy », araka ny tatitra nataon-dRakotomandimby Benjamin, kaomiseran’ny lalàna eo anivon’ny Filankevipanjakana, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Ny fisiana hosoka sy halabato no voalaza fa antony nampihintsana an’ireto ben’ny tanàna ireto, ka nandravan’ny Filankevi-panjakana ny didimpitsarana nahalany azy ireo.
« Mbola hisy ny fotoana hamoahana amin’ny fomba ofisialy ny antsipiriany tamin’ireo raharaha ireo. Isan’izany koa ireo kaominina voakasiky ny raharaha », hoy ihany itsy kaomisera itsy.
Mpanolotsaina iray kosa no fantatra fa niongana taorian’ny didy navoakan’ny Filankevitra. Misy raharaha mikasika ny fifidianana ben’ny tanàna efatra amby enimpolo amby zato no hotsarain’ny Filankevi-panjakana, amin’ izao fotoana izao. « Hoezahina hovitaina amin’ity herinandro ity ireo raharaha efatra amby efapolo sy telonjato amin’ireo dimy amby fitopolo sy efajato eto am-pelatananay. Hiandalana kosa ireo ambiny », araka ny fanampimpanazavan-dRakotomandimby Benjamin.
Famerenana fifidianana 38
Niampy roa indray ny fifididianana ben’ny tanàna nodidian’ny Filankevi-panjakana ny tsy maintsy hamerenana azy. Miampy efatra amby roapolo io tarehimarika io, araka ny didy navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana, tamin’ny volana janoary 2020. Kaominina roa ambin’ny folo kosa no tsy nisy fifidianana ka tsy maintsy hanatontosana fifidianana vaovao satria tsy nisy kandidà ary tsy nisy latsa-bato.
Raha atambatra izany dia valo amby telopolo ireo fifidianana ben’ny tanàna tsy maintsy haverina manerana an’i Madagasikara. Folo amin’ ireo no ao amin’ny faritanin’i Toliara, izay betsaka indrindra. Tsy ho vita amin’ity taona ity avokoa anefa ireto famerenana latsa-bato ireto.
« Ny fifidianana loholona no homanintsika izao », hoy ny mpampaka-tenin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, Rakotondrazaka Fano.